Dhageyso: Xasan Shiikh “Cabashada waan dhageysaneynaa” – idalenews.com
Dhageyso: Xasan Shiikh “Cabashada waan dhageysaneynaa”
Madaxweynaha Dalka Mudane Xasan Shiikh Maxamuud ayaa waxa uu sheegay inay ugu baaqayaan Maamulka Axmed Madoobe inay udhago raariciyaan dadka ku dhaqan Jubbooyinka oo ay dhageystaan fikradaha iyo cabashooyinka ay ula yimaadaan.
Halakan Ka Dhageyso.
Xasan Shiikh oo ka hadlayey Shirkii Shalay uu daah furay Magaalada Kismaayo ayaa sheegay inay ku raacsan yihiin fikirkii Axmed Madoobe uu sheegay oo ahaa hadii dadka Jubbooyinka deggan ay heshiiyaan uu culeys weyn Soomaliya ka dagayo.
Madaxweynaha oo sii hadlayey ayaa sheegay inay ku cel celinayaan in Maamulka Jubba uu dhageysto hadalada Shacabkiisa islamarkaana Dawlada Somaliya ay ku taageereyso wax walbo oo dib uheshiisiinta la xiriirta.
Xasan Shiikh ayaa dhanka kale sheegay inuu dhageysan doono cid kasta oo wax ka tabaneysa Dawladiisa isagoo ballan qaaday in wax walbo oo dib uheshiisiin ku imaan karto shacabka dhexdiisa ay udhago nuglaanayaan.
Dhageyso: Raysal wasaaraha Soomaaliya oo sheegay inuusan jirin Khilaaf asaga iyo Madaxwaynaha U dhaxeeya.
Dhageyso: Fanaanka Xasan Aadan oo Soo Hadlay.